धमाधम मन्त्रीहरु नै माधब नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश ! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
धमाधम मन्त्रीहरु नै माधब नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश !
एमाले चितवनका नेता तथा वाग्मती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले नेकपा एमाले त्याग गरेका छन् ।
मन्त्री खनालले बुधबार माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी नामको नयाँ दल दर्तामा हस्ताक्षर गरेपछि नेकपा एमाले त्याग गरेका हुन् । उनले केन्द्रीय सदस्यहरुको तर्फबाट ५२ नम्बरमा सनाखत गरेका छन् ।
उनी निकट स्रोतले जनाएअनुसार मन्त्री खनाल मंगलबार साँझ हेटौंडाबाट सिधै चन्द्रागिरी रिसोर्ट पुगेका थिए ।नेता खनाल यसअघि नेकपा एमाले चितवनको अध्यक्ष थिए । उनी चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट वाग्मती प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि पेस भएको नामवलीको सनाखत गर्ने काम सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले ५५ केन्द्रीय सदस्य र २९ सांसदको सनाखत गरेको छ ।
भारतमा उपचाररत रहेका नेता झलनाथ खनालको पनि आयोगले सनाखत गरेको छ । उनले दूतावासमार्फत पठाएको पत्रका आधारमा सनाखत गरिएको हो ।
काठमाडौं । एमाले चितवनका नेता तथा वाग्मती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले नेकपा एमाले त्याग गरेका छन् ।मन्त्री खनालले बुधबार माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी नामको नयाँ दल दर्तामा हस्ताक्षर गरेपछि नेकपा एमाले त्याग गरेका हुन् । उनले केन्द्रीय सदस्यहरुको तर्फबाट ५२ नम्बरमा सनाखत गरेका छन् ।
माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि पेस भएको नामवलीको सनाखत गर्ने काम सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले ५५ केन्द्रीय सदस्य र २९ सांसदको सनाखत गरेको छ ।भारतमा उपचाररत रहेका नेता झलनाथ खनालको पनि आयोगले सनाखत गरेको छ । उनले दूतावासमार्फत पठाएको पत्रका आधारमा सनाखत गरिएको हो ।